Manana Anarana ve Andriamanitra? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Abkazianina Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Altaï Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Bashkir Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinamwanga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kamba Kantôney Nentim-paharazana Kekchi Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mongol Mooré Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Swahili Swati Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tetun Dili Tiorka Tiv Tseky Tsonga Turkmène Twi Télougou Udmurt Umbundu Valencienne Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolof Xhosa Yorobà Zapoteky (Quiatoni) Zoloa Éwé
Manana anarana daholo ny olombelona. Tsy ara-dalàna àry ve raha manana anarana koa Andriamanitra? Mila manana anarana sy mifampiantso amin’ny anarany ny mpinamana. Tsy tokony hitovy amin’izany koa ve ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra?
Izao no lazain’Andriamanitra, ao amin’ny Baiboly: “Izaho no Jehovah! Izany no anarako.” (Isaia 42:8) Manana anaram-boninahitra maro izy, ohatra hoe “Andriamanitra Mahery Indrindra”, “Tompo Fara Tampony”, ary “Mpamorona.” Omeny voninahitra anefa ny mpivavaka aminy ka asainy miantso azy amin’ny anarany manokana.—Genesisy 17:1; Asan’ny Apostoly 4:24; 1 Petera 4:19.
Dikan-tenin’ny Baiboly maro no ahitana ny anaran’Andriamanitra, ao amin’ny Eksodosy 6:3. Izao no voalaza ao: “Niseho tamin’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba aho, tamin’ny maha Andriamanitra Mahery Indrindra ahy. Fa ilay anarako hoe Jehovah kosa, mbola tsy tena nampahafantariko azy.”
Jehovah no andikana ny anaran’Andriamanitra amin’ny teny malagasy, ary efa hatramin’ny ela izany no nampiasaina. Maro ny manam-pahaizana tia an’ilay hoe “Iaveh” nefa Jehovah no tena be mpahafantatra sy be mpampiasa. Tsy tamin’ny teny malagasy no nanoratana ny tapany voalohany amin’ny Baiboly fa tamin’ny teny hebreo, ary vakina avy any ankavanana miankavia ny soratra amin’ny teny hebreo. Ireto renisoratra efatra ireto ny anaran’Andriamanitra amin’io fiteny io: יהוה. Adika hoe YHWH ireo ary fantatra amin’ny hoe Litera Efatra.
Misy ny anaran’Andriamanitra ve ao amin’ny Baiboly sora-tanana tany am-boalohany?
Inona no Dikan’ny hoe Mahalala ny Anaran’Andriamanitra?
Fantaro hoe iza ny anaran’Andriamanitra ary inona no dikan’ny anarany. Hanampy anao hahafantatra ny toetrany izany.
Hizara Hizara Manana Anarana ve Andriamanitra?
ijwbq no. 9
Ny Anaran’i Jehovah